I-Sony Xperia 1: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
I-Sony Xperia 1: Iflegi entsha kraca (yeVidiyo)
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, Sony
USony usishiyele iindaba ezininzi kwinkcazo-ntetho yakhe kwi-MWC 2019, njengoko bekulindelekile. Kule mpelaveki, ngaphambi kokuba umsitho uqale, kuye kwavuza ukuba uphawu lwaseJapan luzakusishiya notshintsho olubalulekileyo, ukusukela Batshintshe igama leendawo zabo kweefowuni. Into ekugqibeleni Kubonwe ngesiphelo sayo esitsha, i-Sony Xperia 1.
Emva kokusishiya nge izixhobo ezibini eziphakathiuphawu lwaseJapan ngoku lubonisa iflegi yalo entsha. Imalunga ne-Sony Xperia 1. Ifowuni ehlangabezana noko kulindelweyo kwizixhobo eziphezulu namhlanje. Amandla, ukusebenza kakuhle kunye neekhamera ezilungileyo, njengesiqhelo kwaSony.
Izikrini ezingapheliyo esikubonileyo kwizixhobo zabo eziphakathi kuluhlu baphinde bavele kule modeli. Umphezulu onamandla woluhlu, apho inkampani ifuna ukubuyisa inxenye yomhlaba olahlekileyo kwintengiso ye-smartphone kwiinyanga nje ezidlulileyo. Banobunzima, kodwa ngokungathandabuzekiyo imodeli eyenzelwe yona.
1 Ukucaciswa kweSony Xperia 1
2 I-Sony Xperia 1: Isiphelo esipheleleyo esipheleleyo
Ukucaciswa kweSony Xperia 1
Ukuvuya kwabaninzi, siyabona ukuba u-Sony uhleli ukuxhathisa inotshi okanye umngxunya kwiscreen. Asifumani nanye kwezi mpawu kule Sony Xperia 1. Iscreen esine-side, esinomgangatho omkhulu womfanekiso kunye namandla amsulwa ngaphakathi. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwefowuni:
Ukucaciswa kobugcisa Sony Xperia 1
Umzekelo Xperia 1
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie
Isikrini I-6.5-intshi ye-OLED ngesisombululo se-4K + kunye ne-21: 9 ratio
Inkqubo Snapdragon 855
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB nge-MicroSD)
Ikhamera esemva I-12 MP f / 1.6 OIS Dual Pixel + 12 MP f / 2.4 I-angle ebanzi + 12 MP f / 2.4 I-Optical zoom
Ikhamera yangaphambili Ilungu le-8 MP FF
Conectividad I-Bluetooth 5.0 ezimbini ze-SIM WiFi 802.11 a / c i-USB-C WiFi MIMO
Ezinye izinto Umfundi weFingerprint kwicala loKhuselo lwe-NFC IP68 Dolby Atmos
Ibhetri I-3.330 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu Ubukhulu: 167 x 72 x 8.2 mm
U bunzima I-180 gram
Kule modeli baphinde babheje kwiscreen esine-21: 9 ratio. Njengakwiimodeli eziphakathi kwinqanaba eliphakathi, inkampani iye yanciphisa ngokubonakalayo ii-bezels ezisecaleni zefowuni. Oku kuvumela le Sony Xperia 1 ukuba isifikelele ngesi sikrini singenasiphelo. Ngaphandle kwamathandabuzo, iza ngokhetho olukhulu xa kufikwa ekusebenziseni umxholo wemultimedia. Kwakhona ngenxa yokuba inkampani ihlawule ingqalelo ekhethekileyo kwisandi emnxebeni.
Sifumana ezinye izithethi zestereo, Ukongeza kukuhambelana neDolby Atmos (ifunyenwe kwiNetflix, phakathi kwabanye). Yintoni evumela isandi sokuntywila ngawo onke amaxesha. Inxalenye ephambili xa usebenzisa umxholo kwisixhobo.
I-Sony Xperia 1: Isiphelo esipheleleyo esipheleleyo
Ngokuphathelele kulo lonke ulwazi, sinokubona ukuba luluhlu oluphezulu. Sifumana iprosesa efanayo esiyibonileyo izolo kwezinye izixhobo eziphezulu ezinje nge LG G8 ThinQ okanye I-LG V50 5G. Inkqubo ithi i-Snapdragon 855, nangona kule meko, i-Sony Xperia 1 ayizukuhambelana ne5G. Ayisiyonto iphambili yophawu lwaseJapan ngalo mzuzu, okanye kubonakala ngathi.
Sifumana ikhamera yangemva kathathu. Iya kuba yinto yokuqala ye-Sony smartphone ukuba ibe neekhamera ezintathu ngasemva. Indibaniselwano yeendidi ezintathu zeenzwa, zonke ziyi-12 MP. Nangona sibulela kule ndibaniselwano uya kuba nakho ukuthatha iifoto ezintle ngale Sony Xperia 1. Kuba sidibene ne-engile, i-angle ebanzi kunye nefowuni kwifowuni, ethembisa ukusebenza kakuhle.
Kule modeli, inye kuphela indibaniselwano ye-RAM kunye nokugcinwa. Ke ayizukubakho into yokucinga malunga nokuthenga ifowuni ezivenkileni. Ibhetri kwesi sixhobo yi3.330 mAh, inkulu kakhulu kunaleyo yeemodeli eziphakathi. Ngokudibeneyo nomprosesa kunye nokujonga ukuba sisikrini se-OLED, kunokuba ngaphezulu ngokwaneleyo kubasebenzisi abayithengayo.
Inqaku elinye elifunwa ngabasebenzisi abaninzi yindawo yendawo yokubamba iminwe. Ayikho kwicala, kwaye ayikho phantsi kwesikrini. Kule Sony Xperia 1, sifumana isivamvo seminwe kwicala elinye. Isisisombululo esonyulwe yinkampani njengesiphumo sokwandisa izikrini. Isigqibo esingenakubhenela wonke umntu.
Njengoko sele kwenzekile ngeemodeli eziphakathi eziphakathi, inkampani khange usinike ulwazi malunga nokuqaliswa kwemarike. Asazi ukuba iza kuphehlelelwa nini okanye ixabiso eliza kuba nalo xa lihlasela iivenkile. Sinokulindela kuphela indibaniselwano yesiphelo esiphakamileyo ngokwe-RAM kunye nokugcinwa.
Into esiyaziyo kukuba iyakwenzeka thenga le Sony Xperia 1 ngemibala eyahlukeneyo. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi: mnyama, ngwevu, mhlophe kunye nemfusa kule ndawo iphakamileyo yohlobo lwaseJapan.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Xperia 1: Iflegi entsha kraca (yeVidiyo)
I-Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus: Uluhlu oluphakathi lukaSony (Ividiyo)
Ityhile ixabiso kunye nomhla wokumiliselwa eSpain weNokia 9 PureView